Mitohy ny tsy fanarahan-dalàna… | NewsMada
Mitohy ny tsy fanarahan-dalàna…
Mitohy ihany ny tsy fanarahan-dalàna afitsoky ny mpitondra. Eo koa ny tsy fampiharana didim-pitsarana. Efa nalaza ratsy ny fanitsakitsahana ny didim-pitsarana amin’ny famerenana ireo mpiasan’ny orinasam-panjakana Air Mad, ohatra.
Atao tsinontsinona na ny didin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) aza. Toy ny tsy fanajana ny lalàmpanorenana ihany. Mandeha ho azy ny tsy fanajana didy aman-dalàna: tsy misy olon-kotahafina, samy manao ny ataony.
Ny HCC natao hampanaja ny lalàmpanorenana aza, mamorona didy hafahafa tsy araka izany: ny filoham-pirenena, ohatra, no tokony haato fa tsy nanaja lalàna noho ny tsy nananganany ny Fitsarana avo (HCJ), nefa ny governemanta no noravana.
Tsy mahagaga raha manara-davahana amin’ny tsy fanarahana sy tsy firaharahana izay didy aman-dalàna ny rehetra. Misy ambonin’izany? Na mpitondra fanjakana isan’ambaratonga, na tomponandraikitra isan-tsehatra, na mpanao politika…
Aiza ho aiza, ohatra, ny fampiharan-dalàna ireo depiote izay takina ny fanonganana azy ireo noho ny tsy fanajana ny And. 72 amin’ny lalàmpanorenana? Tsy mahazo miova vondrona politika ankoatra ny vondrona izay nahavoafidy azy.
Aiza ho aiza koa ireo depiote nanao kolikoly tamin’ny fandaniana ny lalàm-pifidianana? Tsy nisy sahy nametraka fitoriana izy ireo noho ny fahafaham-baraka. Nefa nisy ny nampiaka-peo fa hitory raha tsy hita ny porofo. Porofo ny fanginana?
Ahoana koa ny amin’ireo fahefana mpanatanteraka nanao kolikoly tamin’izany, fa tsy mandeha ila ny kolikoly? Vitavita ho azy amin’izao. Tsy hita izay tena ady amin’ny kolikoly, na fanambin’ny governemanta nifandimby eo aza izany.
Ahoana koa ny amin’ireo mpitondra sy ny akaiky azy nampiasa fahefam-panjakana ho amin’ny tombontsoany manokana: fandraharahana tsy ara-dalàna, fanondranana antsokosoko harem-pirenena… Tsy hitahita ho azy rehefa vita ny fitondrana?
Mitohy ary miverimberina hatrany ny krizy, raha mbola mitohy sy miverimberina ny tsy fanarahan-dalàna sy tsy fampiharana didim-pitsarana afitsoky ny mpitondra. Eo koa ny fisian’ny tsimatimanota, ny fanararaotam-pahefana, ny tsy firaharahana vahoaka…